Iberdrola: kambani yemagetsi inosarudzwa nevaongorori | Ehupfumi Zvemari
Chikamu chemagetsi ndechimwe chezvakakosha muSpanish equities uye mukati mayo hapana mubvunzo kuti Iberdrola ndiyo kambani yesarudzo kune huwandu hwakawanda hwevanoongorora zvemari. Inopa hukama hwakanakisisa pakati pekubatsira uye njodzi iyo inokodzera kwazvo vashandisi vanozvidzivirira kana vanochengetedza. Ehezve, nekutenga kwemasheya avo haugone kuve mamioneya husiku hwese. Zvirokwazvo kwete. Asi mukudzoka, ichagadzira yakakura kugadzikana munzvimbo dzawakavhura. Chero iro zano rekudyara iwe rawasarudza kutora kubva zvino zvichienda mberi.
Iberdrola, pamwe neEndesa uye Gasi Natural, ndiwo anorema ebato. Asi nekumwe kupesana kusinganzwisisike kunofanirwa kuongororwa kuti unzwisise zvishoma kushanduka kwemigove yayo mubenchmark yechiratidzo cheSpanish stock market, Ibex 35. Nemutengo wakanangwa panguva iyo iri padhuze zvakanyanya nematanho akakosha ayo ane mu 7 euros chiito. Nenzira iyi, ichine nzira refu yekufamba sezvo iine mukana wekukura uri pakati pe5% ne10%, zvichienderana nemuongorori wezvemari anotarisira kuongorora chinzvimbo chayo mumisika yemari.
Iyi sarudzo yekutenga iyo isingafanire kushomeka mune chero mari yekudyara. Nekuti haina kupa kutyisidzira kukuru kune investor, sezvazvinoitika nevamwe pointer tsika yemusika wemusika wenyika. Mupfungwa iyi, migove yekambani iyi yakanyorwa yakafamba pakati pe5 kusvika 6,50 euros mukati memakore mashanu apfuura. Asi nenzira inononoka, yakanyarara uye ita ruzha rwakanyanya. Izvi, shure kwezvose, Iberdrola, uye iwe unofanirwa kuzvichengeta mundangariro kune zvese zvakanaka nezvakaipa. Kuve, mune chero mamiriro ezvinhu, imwe yebhuruu chip kukosha kweanowanikwa mudzimba equities. Ndokunge, imwe yemari huru kwazvo sezvo ichifambisa mazita mazhinji muzvikamu zvese zvekutengesa.
1 Iberdrola: akanakisa magetsi
2 5% inodzoka pazvikamu
3 Iko kukosha kwekudzivirira
4 Dividend kuwedzera
5 Rudzi rwebhizinesi rinodzokororwa
6 Mipiro yako inonyanya kukosha
Iberdrola: akanakisa magetsi
Kana kukosha kwakakosha uku kuchiratidzwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti ndeimwe yeanokurudzirwa kwazvo muchikamu chayo. Kusvika padanho rekuti riripo mumadziva ese nevanoongorora vanozivikanwa venharaunda. Ichi ndicho chinhu chinofanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi kana chishuwo chevashambadziri vadiki nepakati chiri chekupinda mumusika wemasheya kuti zvinhu zvavo zvemunhu zviite purofiti. Mune ino pfungwa, iwe haugone kukanganwa kuti ndeye stock exchange proposal iyo haipe kushamisika kwakanyanya makore ose. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinotarisirwa kwazvo kune zvese zvinangwa uye zvinangwa.
Kune rimwe divi, kambani yemagetsi inoitika kuva imwe yesarudzo dzinodiwa kuchengetedza zvigaro munguva yepakati nepakati. Hapana maburi ezvekufungidzira mashandiro mumisika yemari. Hazvishamisi kuti ivo vanounza runyararo rukuru rwepfungwa kune vanoita mari avo vakatomisikidzwa muzvikamu zvavo. Iko hakuna njodzi dzekukuvara kukuru, kunyangwe kunyatso kumira kwakadzika mumutengo wayo. Iko kuchengetedzeka kunokunda pane chishuwo chekuwedzera capital kuburikidza nemusika wemasheya. Iine tambo yakagadzika yebhizinesi kubva kune ese maonero uye icho chinhu chekutarisa kana uchiisa mari.
5% inodzoka pazvikamu
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza zveIberdrola ndechekuti inopa kufarira padyo ne5% mukugoverwa kwezvikamu kune avo vanogovana navo. Chii chinoita kuti kambani ive imwe ye zvinobatsira yehurumende yenyika. Kubva pane ino yakajairika mamiriro, haifanire kunge isipo mune portfolio yevaponesi vanotsvaga kuchengetedzeka pane zvimwe zvinofunga. Nekuti mune ino pfungwa, iri zano rekutanga kugadzira rakatemwa mari yemari mukati meiyo musiyano. Zvisinei nemasheya angashanduke sei mumisika yemari. Iine huwandu hwezvibereko hwakakwira kupfuura hweiyo mikuru yemabhengi zvigadzirwa (nguva yekuisa, zvinyorwa zvevimbiso kana maakaundi ane mari zhinji).
Muchidimbu, haugone kukanganwa kuti zvikamu zveIberdrola zvakanyoreswa mune chimwe chikamu chakanyanya kubatsirwa kubva ku mugove wekugovera. Mumakore ese, anovauraya kaviri, kamwe chete mazuva ekutanga egore uye mamwe ese nekutanga kwemazororo ezhizha. Chero zvazvingaitika, inobhadharwa semubhadharo kuaccount yazvino yevanobata uye kwete pasi pemari yakawanda. Kana zvisiri, pane kudaro, imari chikwereti, imomo imomo inobviswa zvakananga. Icho chinhu chisingazivikanwe nechikamu chikuru chevashandi vekambani yemagetsi iyi. Neimwe yeakanakisa mashandiro emasecurity akanyorwa pamisika yemari.
Iko kukosha kwekudzivirira
Iyi ikambani yakanyudzwa mune chimwe chezvikamu zvinochengetedza zvemusika wevatengesi. Iko mashandiro epakati nepakati-erefu anotungamira pamusoro peaya asingagumi zvachose. Nekuti zvirokwazvo, hazvigone kukanganwika kuti Iberdrola haisi kukosha kwekuita mari yakawanda. Kana zvisiri izvo zvinopesana, zve kukurudzira kuchengetedza pamusoro pemamwe mazano ane hukasha. Zvakafanana nekuchengetedza saga rekuchengetedza iro riri kupa kudzoka zvishoma nezvishoma uye pasina kunyanyisa fanfare mune mhedzisiro.
Kune rimwe divi, iyi kambani yemagetsi inoshanda pasi pemitsara yakatetepa isina kuchinjaniswa nekutengesa mashandiro. Kana zvisiri izvo zvinopesana, ndezvekuchengetedza zvinzvimbo kwemakore mazhinji. Vazhinji sekuda kwaita muzvinashawo pachake. Kubva pane idzi nzira zvinokwanisika kutora chinzvimbo mune kukosha, kungave kubva kune zvechisimba mashandiro kana pane zvinopesana nekucheka kwakanyanya kuzvidzivirira. Chero zvazvingaitika, icho chikumbiro pamusika wemasheya icho chinowanzo fanirwa kushomeka kuitira kuti inyatso kugadzira mari yekudyara. akaenzana uye akasiyana.
Chimwe chezvinhu zvitsva zvinoratidzwa nekambani iyi ndechekuti mukati memakore mashoma anotevera ichawedzera gohwo remugovano. Kusvikira pakuti inogona kusvika isingasviki 6% uye ichidarika vamwe vakwikwidzi mukati mechikamu chemagetsi. Semhedzisiro yemaitiro ayo akaverengerwa bhizinesi ayo anogona kuatungamira kuti ive imwe yeiyo makambani anobatsira kwazvo padanho renyika. Nebatsiro pamugove iyo iri imwe yezvinonyanya kufadza panguva ino uye icho chichava chimwe chinokurudzira vatengesi kuti vatarise kambani iyi kutora zvigaro kwemakore mashoma anotevera.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveIberdrola inyaya yekuti ikambani inosimbiswa zvakanyanya munharaunda yekumba. Kusvika padanho rekunakirwa nekuvimbwa kwechikamu chakanaka chevadiki nepakati varimi. Nekuti kunze kwekuita purofiti iyo inogona kugadzirwa pamwe nekushanduka kwemasheya ayo kune zvakare kufarira kwezvikamu zvayo. Nzira mbiri-nzira, nekudaro, kuita iyo kuchengetedza kunobatsira kubva ikozvino zvichienda mberi. Kupi njodzi dzinodzorwa zvakanyanya uye zvakaoma kwazvo kuti iwe urasikirwe nechikamu chakakosha kwazvo chemari yakachengetwa.
Kune rimwe divi, magetsi nderimwe remabhizinesi akanyanya kugadzikana munharaunda yenharaunda yenyika. Nemakwikwi mashoma kwazvo nekuda kwezviitiko zvakasarudzika zvinogara chikamu ichi chakakodzera. Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvakaoma kwazvo kuti kirasi iyi yemakambani iparadze pane imwe nguva muhupenyu hwavo hwebhizinesi. Chinhu chisingaitike mune mamwe madhivhiti chinotapurwa neichi chinoshamisa chokwadi kana chichiitika mune mamwe makambani akanyorwa. Zvakawanda kuravira kwevanoponesa hupenyu.
Mipiro yako inonyanya kukosha
Iyo chaiyo yakasarudzika mhando yekambani iyo yakwanisa kuchinjika kune itsva nguva. Kunyangwe iine huremu chaihwo mukati mezvekugadziriswa. Iko kune zvinhu zvakawanda zvekuwedzera izvo zvinogona kubatsira kune vanoita mari uye pakati pazvo izvo zvinongedzo zvinotevera zvinomiririra.
Iyo ndeimwe yeakakoshesa tsika dzekuenzana kwenyika.
Icho chiri chekambani ine tsika refu mumusika wemasheya.
Icho chengetedzo iyo inomira pachena kune yayo yakakwira capitalization.
Izvo hazvidi kutarisirwa kwakasarudzika kudzivirira njodzi mumutengo wayo.
Inopa PER iyo inofungidzirwa nevanoongorora zvemari seinopfuura zvinonakidza.
Iyo inosanganisirwa mune akakosha maitiro ayo anoumba weSpanish stock stock.
Kukwezva kwayo kukuru kuri mune kuchengetedzeka kunopihwa mari yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iberdrola: kambani yemagetsi inosarudzwa nevanoongorora